Iintlawulo zeZithuthi zikaRhulumente zeBursa! Abafundi bakhutshelwa ngaphandle kummiselo omtsha kumaxabiso ezithuthi zikawonkewonke eBursa nge-1 kaJanuwari ka-2020. Ke, kwiminyaka emi-4 eyadlulayo, i-1,5 TL yafaka isicelo kwiibhodi yabafundi [More ...]
I-Istanbul Metro yathutha abantu abamalunga nama-700 ezigidi abakhweli
I-Istanbul Metro yathutha abantu abamalunga nezigidi ezingama-700; Imetro, ekhethelwa ukuhamba ngokukhawuleza nangokukhululekileyo, yakhonza abahlali baseIstanbul ngesantya esipheleleyo ngo-2019. Phantse babe zizigidi ezingama-700 abakhweli phakathi enyakeni [More ...]
T MeetingDEMSAŞ GCC Intlanganiso eyayiqhutywa
Intlanganiso yeBhodi yoLawulo yeZiko yabanjelwa abaSebenzi baseburhulumenteni e-TÜDEMSAŞ General Directorate kunye nezicelo zasonjululwa. Kwintlanganiso ebibanjwe ngoLwesine, nge-2019 kaDisemba ngo-26, izimvo neengcebiso zabasebenzi baseTÜDEMSAŞ, Memur-Sen [More ...]
Ubhiyozela unyaka omtsha welizwe lethu, ilizwe lethu elixabisekileyo noluntu lonke. Ndinqwenela ukuba unyaka wama-2020 ube ngunyaka apho amathemba andisiweyo, uxolo luphethe kwihlabathi liphela, kwaye iimvakalelo zobuhlobo, ubuzalwana kunye nokuqina bufumana amandla. UNyaka oMtsha, [More ...]
Usodolophu womasipala weDolophu yaseKayseri UMemduh Büyükkılıç, 2020 izakuba yenye yeminyaka ukumakisha ikamva likaKayseri, utshilo. Umongameli Büyükkılıç, Kayseri, kungekuphela nje kwikamva lanamhlanje kubaluleke kakhulu kwiiprojekthi [More ...]
NjengeCandelo lezeThutho Jikelele leTCDD, sisele sishiya omnye unyaka apho sinikezela ngeenkonzo ezihlaziyiweyo kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu kubemi bethu abahlonelwayo. Eyona Ingxenye ebalulekileyo yehlabathi lanamhlanje ingakumbi kwicandelo kaloliwe leyo ibhaliswe impumelelo ebalulekileyo Turkey [More ...]
Ukuhlangabezana nesidingo esandayo sabahambi ngenxa yoNyaka oMtsha woNyaka, oololiwe baseMarmaray baya kusebenza kuphela de kube ngu-02.00: 31 ngoNyaka oMtsha. Oololiwe baseMarmaray bayaqhutywa phakathi kwezikhululo zeZeytinburnu-Söğütlüçeşme nge-15 kaDisemba, ngamakhefu amathandathu emizuzu. [More ...]
Izibambiso e Çambaşı Doğa Izixhobo zilungele iXesha
USodolophu kaMasipala waseOrdu Metropolitan UMehmet Hilmi Güler wenza utyalomali olubalulekileyo e-Ordu ukuze abe namava okhenketho unyaka wonke kwaye ingakumbi ukuvuselela ukhenketho lwasebusika ngesiqubulo i-Ordu Ordu hayi kwiinyanga ezi-3 kodwa kwiinyanga ezili-12 uOrdu. [More ...]
I-European Side Metrobus Stops kunye neMephu ye-Metrobus
I-European Side Metrobus Iindawo kunye neMephu ye-Metrobus: Ungazibona zonke iindawo zokuma kweMetrobus kwimephu efanayo, eyeyona ndawo isemtrobus ikufutshane kwindawo oya kuyo kunye nokuma metrobus kwindawo oya kuyo. [More ...]
Ukuzonwabisa kwi-Sdu e-Ordu
USodolophu kaMasipala waseOrdu Metropolitan Umkhosi ka-Mehmet Hilmi Güler we-Ordu wama-Ordu ungekapheli iinyanga ezili-3 kodwa uneenyanga ezili-12. Ukuze ube namava obusika eOrdu, kuMasipala weNqila, eAkukuş [More ...]
Ukuhamba simahla ngoNyaka oMtsha woNyaka. Isipho soNyaka oMtsha esivela kuMeya waseAntalya uMuhittin Böcek kubahlali baseAntalya. Iibhasi zeplanethi ezisemthethweni zikaMasipala weNqila kunye ne-ANTRAY ziya kubonelela ngenkonzo yasimahla kubemi kude kufike uNyaka oMtsha. [More ...]
Ezothutho, inxaso-mali kaMasipala oMbaxa waseKocaeli, wabhengeza ukuba iAkçaray izosebenza kude kube ngo-02.00: 1 ngoNyaka oMtsha. I-Akçaray'ın ngosuku lokuqala lonyaka nge-2020 kaJanuwari, 02.00 ngo-30:XNUMX kude kube yimizuzu engama-XNUMX rhoqo kwimizuzu engama-XNUMX [More ...]
Usodolophu we-İzmir u-Tunç Soyer uqale usuku lokugqibela lonyaka ngothutho loluntu. USoyer wanika iintyatyambo kunye neplani yomkhweli kwisigidi se-18 esikhwele esikhepheni kunye nomqhubi osisigidi esinye usebenzisa isikhephe. Izmir [More ...]
U-2019 ibingunyaka woTyalo-mali lwe-İzmir
UMasipala oMbaxa wase-İzmir utyalomle isi-2019 sezigidi ze-TL ngonyaka ka-3,3. Iipesenti ezingama-41 zenkcitho iyonke kutyalo-mali kwiMetropolitan yotyalo-mali inyuke ngeepesenti ezili-16 xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Izmir Metropolitan Municipality, [More ...]